Are Drip Lines Really Necessary for Healthy People - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
” Drip ပုလငျးခြိတျတာ တကယျအကြိုးရှိရဲ့လား? “
တဈနေ့ ကြှနျတေျာ့ဆေးခနျးအတှငျးသို့သနျသနျမာမာ လူလတျပိုငျးအမြိုးသားတဈဦးဝငျလာသညျ။
ကြှနျတျော။ ။ လာအဈကို ကြှနျတျောဘာကူညီပေးရမလဲ။
လူနာ ။ ။ ဆရာကြှနျတျော ပုလငျးခြိတျခငျြလို့။
ကြှနျတျော။ ။ အျော…. အခုဘယျလိုနလေို့လဲဗြ။
လူနာ ။ ။ ကြှနျတျော နုံးပွီးကိုယျတှလေကျတှေ ကိုကျခဲနသေလိုဘဲ မလနျးဘူးဖွဈနတေယျ ပွီးတော့ နှဈလလောကျတဈခါခြိတျနကွေဆိုတော့ သူ့အခြိနျကလြာရငျ ခြိတျလိုကျမှနကေောငျးသှားတာ။
ကြှနျတျော။ ။ အဈကို ဘာအလုပျလုပျလဲဗြ။
လူနာ ။ ။ ဆိုကျကားနငျးတယျ ဆရာ။ အခုတလော နပွေငျးလာတော့ ပိုပငျပနျးတယျဆရာ။
ကြှနျတျော။ ။ အငျး… ဟုတျတယျဗြ နပွေငျးတော့ခြှေးထှကျမြားတာနဲ့ နုံးနတောနမှော ပွီးတော့ဆိုကျကားနငျးတော့ ပငျပနျးတော့ကိုယျလကျ ကိုကျခဲတာရှိတတျပါတယျ။ အဈကိုအစားအသောကျရော ကောငျးရဲ့လား။ အိမျမှာရော စိတျပငျပနျးစရာ စိတျညဈစရာ ကိစ်စတှမြေားရှိလား။
လူနာ ။ ။ စားလို့တော့ကောငျးပါတယျဆရာ။ ကလေးသုံးယောကျနဲ့ဆိုတော့ဆရာရယျ ဒီလိုဘဲ လုံးခြာလိုကျနတေော့တာပါဘဲ။
ကြှနျတျော။ ။ ကြှနျတျော နညျးနညျးလောကျရှငျးပွမယျဗြ အဈကိုခြိတျခငျြတဲ့ ပုလငျးကထူးထူးခွားခွား အားရှိသှားမှာ တော့မဟုတျဘူးဗြ။ drip ပုလငျးတှကေိုကြှနျတျောတို့က အကွမျးဖဉျြး လေးမြိုးခှဲပွောလို့ရတယျ normal saline(အငနျရညျ)၊ dextrose water(အခြိုရညျ)၊ dextrose saline(ခြိုငနျရညျ)၊ Ringer’s lactate(ရငျဂါ)စသဖွငျ့ ပေါ့။ ဓာတျဆားထုပျမှာလညျး အဲ့ပုလငျးတှထေဲမှာပါတဲ့ အခြိုဓာတျအငနျဓာတျတှပေါတာဘဲ။ ပါဝငျတဲ့အခြိုးအစား မတူတာဘဲရှိတာ။ အဲ့ဒီပုလငျးထဲကိုမှ အနီရောငျ အဝါရောငျ ပုလငျးလေးတှဖွေဈတဲ့ Barplex(ဗပလကျ အားဆေး) ရောထညျ့လိုကျတာဗြ။ အဲ့တော့ အဈကိုပုလငျးခြိတျမယျ့အစား ဓာတျဆားထုပျဖြျောသောကျပွီး အားဆေးသောကျ တာနဲ့အတူတူဘဲဗြ။ အကွောထဲတိုကျရိုကျသှငျးတာနဲ့ ပါးစပျကနသေောကျရတာဘဲကှာတာ ပွီးတော့ လိုသလောကျဘဲခန်ဓာကိုယျကအသုံးပွုပွီး ပိုတာတှကေို ဆီးထဲမှာ စှနျ့ပဈလိုကျတာ အဲ့တော့ ပိုကျဆံပိုကုနျတာဘဲ အဖတျတငျတာပေါ့။
လူနာ ။ ။ ဒါပမေယျ့ ဆရာ ခြိတျပွီးသှားရငျတော့နလေို့ကောငျးသှားသလိုဘဲ။
ကြှနျတျော။ ။ အဈကိုလုံးဝမခြိတျဖူးသေးတုနျးက တခွားလူတှကေခငျဗြားအားနညျးနလေို့ဖွဈမယျအကွောဆေးသှငျးကွညျ့ပုလငျးခြိတျကွညျ့ပါလားလို့မြားပွောကွလားဗြ။
လူနာ ။ ။ ဟုတျတယျဆရာ ကြှနျတော့သူငယျခငျြးက အဲ့လိုဘဲခြိတျနလေို့ ကြှနျတေျာ့ကိုခြိတျကွညျ့ပါလားဆိုတာနဲ့ စှဲသှားတာဘဲဗြ။
ကြှနျတျော။ ။ အားဆေးကတော့မစှဲပါဘူး အဓိကက စိတျစှဲနတောဗြ။အဈကို့သူငယျခငျြးကလညျးတိုကျတှနျးတယျ သူကိုယျတိုငျလညျးခြိတျနတေယျဆိုတော့ ခြိတျလိုကျရငျကောငျးမှာဘဲလို့အဈကိုယုံကွညျထားတယျ။ အဲ့တော့ ကိုယျလုပျခငျြတဲ့အရာ ယုံကွညျရာကိုလုပျလိုကျရရငျအနညျးနဲ့အမြား နသောထိုငျသာတော့ရှိသှားတာပေါ့ဗြ။ အဲ့သဘောပါဘဲ။
လူနာ ။ ။ အျော….. ဟုတျလားဆရာ ဒါဆို ဘယျလိုလူတှေ ခြိတျဖို့လိုတာလဲ။
ကြှနျတျော။ ။ ခန်ဓာကိုယျထဲက ရဓောတျဆုံးရှုံးမှူ့မြားတဲ့ အခွအေနတှေဖွေဈတဲ့ ဥပမာ ဝမျးအရမျးသှားလို့ အရမျးအနျလို့ သှေးပေါငျထိုးကသြှားတဲ့အခါ၊ သှေးလှနျတုပျကှေး သှေးလနျ့လို့ ရှော့ချ ရတဲ့အခါ၊ အကွီးစားခှဲစိတျမှူ့တှလေုပျထားလို့ အစာစားလို့ မရသေးတဲ့အခါ၊ ထိခိုကျဒဏျရာရလို့ သှေးထှကျလှနျပွီး သှေးသှငျးဖို့သှေးအဆငျသငျ့မရသေးတဲ့အခါမြိုးတှမှောတော့ ပုလငျးခြိတျဖို့လိုပါတယျ။ အဲ့လိုအခြိနျမြိုှးသှေးပေါငျ အမွနျတကျဖို့လိုတယျလေ ပါးစပျကသောကျနလေို့ မရဘူးပေါ့။နကေောငျး ကနျြးမာနတေဲ့လူတှကေတော့ခြိတျဖို့ မလိုပါဘူး။
လူနာ ။ ။ ဟုတျကဲ့ ဆရာ ခုမှဘဲရှငျးသှားတော့တယျ အရငျတုနျးက အဲ့လိုသခြောမမေးမိဘူး။ ကြေးဇူးတငျပါတယျဆရာ။
ကြှနျတျော။ ။ ရပါတယျဗြာ လူနာတှေ မသိတာကိုသိအောငျပွောပွဖို့ အသိမှားနတော တှကေိုအသိမှနျအောငျ ပွငျပေးဖို့က ကြှနျတျောတို့ ဆရာဝနျတှအေလုပျပါ။ အခုဆို အဈကို ရှငျးရှငျးလငျးလငျးသိသှားပွီဆိုတော့ အဈကို့သူငယျခငျြးလို သူမြားကိုပုလငျးခြိတျဖို့မတိုကျတှနျးတော့ဘူးဆို ကြှနျတျောရှငျးပွရကြိုးနပျတာပေါ့ဗြာ။
” Drip ပုလင်းချိတ်တာ တကယ်အကျိုးရှိရဲ့လား? “
တစ်နေ့ ကျွန်တော့်ဆေးခန်းအတွင်းသို့သန်သန်မာမာ လူလတ်ပိုင်းအမျိုးသားတစ်ဦးဝင်လာသည်။
ကျွန်တော်။ ။ လာအစ်ကို ကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲ။
လူနာ ။ ။ ဆရာကျွန်တော် ပုလင်းချိတ်ချင်လို့။
ကျွန်တော်။ ။ အော်…. အခုဘယ်လိုနေလို့လဲဗျ။
လူနာ ။ ။ ကျွန်တော် နုံးပြီးကိုယ်တွေလက်တွေ ကိုက်ခဲနေသလိုဘဲ မလန်းဘူးဖြစ်နေတယ် ပြီးတော့ နှစ်လလောက်တစ်ခါချိတ်နေကြဆိုတော့ သူ့အချိန်ကျလာရင် ချိတ်လိုက်မှနေကောင်းသွားတာ။
ကျွန်တော်။ ။ အစ်ကို ဘာအလုပ်လုပ်လဲဗျ။
လူနာ ။ ။ ဆိုက်ကားနင်းတယ် ဆရာ။ အခုတလော နေပြင်းလာတော့ ပိုပင်ပန်းတယ်ဆရာ။
ကျွန်တော်။ ။ အင်း… ဟုတ်တယ်ဗျ နေပြင်းတော့ချွေးထွက်များတာနဲ့ နုံးနေတာနေမှာ ပြီးတော့ဆိုက်ကားနင်းတော့ ပင်ပန်းတော့ကိုယ်လက် ကိုက်ခဲတာရှိတတ်ပါတယ်။ အစ်ကိုအစားအသောက်ရော ကောင်းရဲ့လား။ အိမ်မှာရော စိတ်ပင်ပန်းစရာ စိတ်ညစ်စရာ ကိစ္စတွေများရှိလား။
လူနာ ။ ။ စားလို့တော့ကောင်းပါတယ်ဆရာ။ ကလေးသုံးယောက်နဲ့ဆိုတော့ဆရာရယ် ဒီလိုဘဲ လုံးချာလိုက်နေတော့တာပါဘဲ။
ကျွန်တော်။ ။ ကျွန်တော် နည်းနည်းလောက်ရှင်းပြမယ်ဗျ အစ်ကိုချိတ်ချင်တဲ့ ပုလင်းကထူးထူးခြားခြား အားရှိသွားမှာ တော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ drip ပုလင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့က အကြမ်းဖျဉ်း လေးမျိုးခွဲပြောလို့ရတယ် normal saline(အငန်ရည်)၊ dextrose water(အချိုရည်)၊ dextrose saline(ချိုငန်ရည်)၊ Ringer’s lactate(ရင်ဂါ)စသဖြင့် ပေါ့။ ဓာတ်ဆားထုပ်မှာလည်း အဲ့ပုလင်းတွေထဲမှာပါတဲ့ အချိုဓာတ်အငန်ဓာတ်တွေပါတာဘဲ။ ပါဝင်တဲ့အချိုးအစား မတူတာဘဲရှိတာ။ အဲ့ဒီပုလင်းထဲကိုမှ အနီရောင် အဝါရောင် ပုလင်းလေးတွေဖြစ်တဲ့ Barplex(ဗပလက် အားဆေး) ရောထည့်လိုက်တာဗျ။ အဲ့တော့ အစ်ကိုပုလင်းချိတ်မယ့်အစား ဓာတ်ဆားထုပ်ဖျော်သောက်ပြီး အားဆေးသောက် တာနဲ့အတူတူဘဲဗျ။ အကြောထဲတိုက်ရိုက်သွင်းတာနဲ့ ပါးစပ်ကနေသောက်ရတာဘဲကွာတာ ပြီးတော့ လိုသလောက်ဘဲခန္ဓာကိုယ်ကအသုံးပြုပြီး ပိုတာတွေကို ဆီးထဲမှာ စွန့်ပစ်လိုက်တာ အဲ့တော့ ပိုက်ဆံပိုကုန်တာဘဲ အဖတ်တင်တာပေါ့။
လူနာ ။ ။ ဒါပေမယ့် ဆရာ ချိတ်ပြီးသွားရင်တော့နေလို့ကောင်းသွားသလိုဘဲ။
ကျွန်တော်။ ။ အစ်ကိုလုံးဝမချိတ်ဖူးသေးတုန်းက တခြားလူတွေကခင်ဗျားအားနည်းနေလို့ဖြစ်မယ်အကြောဆေးသွင်းကြည့်ပုလင်းချိတ်ကြည့်ပါလားလို့များပြောကြလားဗျ။
လူနာ ။ ။ ဟုတ်တယ်ဆရာ ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းက အဲ့လိုဘဲချိတ်နေလို့ ကျွန်တော့်ကိုချိတ်ကြည့်ပါလားဆိုတာနဲ့ စွဲသွားတာဘဲဗျ။
ကျွန်တော်။ ။ အားဆေးကတော့မစွဲပါဘူး အဓိကက စိတ်စွဲနေတာဗျ။အစ်ကို့သူငယ်ချင်းကလည်းတိုက်တွန်းတယ် သူကိုယ်တိုင်လည်းချိတ်နေတယ်ဆိုတော့ ချိတ်လိုက်ရင်ကောင်းမှာဘဲလို့အစ်ကိုယုံကြည်ထားတယ်။ အဲ့တော့ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့အရာ ယုံကြည်ရာကိုလုပ်လိုက်ရရင်အနည်းနဲ့အများ နေသာထိုင်သာတော့ရှိသွားတာပေါ့ဗျ။ အဲ့သဘောပါဘဲ။
လူနာ ။ ။ အော်….. ဟုတ်လားဆရာ ဒါဆို ဘယ်လိုလူတွေ ချိတ်ဖို့လိုတာလဲ။
ကျွန်တော်။ ။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှူ့များတဲ့ အခြေအနေတွေဖြစ်တဲ့ ဥပမာ ဝမ်းအရမ်းသွားလို့ အရမ်းအန်လို့ သွေးပေါင်ထိုးကျသွားတဲ့အခါ၊ သွေးလွန်တုပ်ကွေး သွေးလန့်လို့ ရှော့ခ် ရတဲ့အခါ၊ အကြီးစားခွဲစိတ်မှူ့တွေလုပ်ထားလို့ အစာစားလို့ မရသေးတဲ့အခါ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရလို့ သွေးထွက်လွန်ပြီး သွေးသွင်းဖို့သွေးအဆင်သင့်မရသေးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာတော့ ပုလင်းချိတ်ဖို့လိုပါတယ်။ အဲ့လိုအချိန်မျိုှးသွေးပေါင် အမြန်တက်ဖို့လိုတယ်လေ ပါးစပ်ကသောက်နေလို့ မရဘူးပေါ့။နေကောင်း ကျန်းမာနေတဲ့လူတွေကတော့ချိတ်ဖို့ မလိုပါဘူး။
လူနာ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ ခုမှဘဲရှင်းသွားတော့တယ် အရင်တုန်းက အဲ့လိုသေချာမမေးမိဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
ကျွန်တော်။ ။ ရပါတယ်ဗျာ လူနာတွေ မသိတာကိုသိအောင်ပြောပြဖို့ အသိမှားနေတာ တွေကိုအသိမှန်အောင် ပြင်ပေးဖို့က ကျွန်တော်တို့ ဆရာဝန်တွေအလုပ်ပါ။ အခုဆို အစ်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားပြီဆိုတော့ အစ်ကို့သူငယ်ချင်းလို သူများကိုပုလင်းချိတ်ဖို့မတိုက်တွန်းတော့ဘူးဆို ကျွန်တော်ရှင်းပြရကျိုးနပ်တာပေါ့ဗျာ။